Isitolo sezingxenye zezimoto ezingasebenzi - Ukuboniswa okulula okuningi - izimpawu zedijithali
Isitolo sezingxenye zemoto eseGhana sethembekile i-Easy Multi Display!
"Kulula kakhulu ukugqamisa imikhiqizo kubaqaphi bami nge-Easy Multi Display!"
I-Acton Motor Spares iyinkampani ethengisa izingxenye zezimoto eziseceleni e-Accra, eGhana, umqondisi u-Abdul futhi isitolo sakhe sesivele sinezilinganiso ezinhle ezingaphezu kuka-300 kuGoogle! Kungakho amakhasimende amaningi nsuku zonke eza e-Acton Motor Spares ukuzothenga izingxenye zemoto ezingasetshenziswa!
Iwebhusayithi yeActon Motor Spares
U-Abdul wayefuna ukukhuphula izingxenye zakhe zezimoto azisebenzisile ezithombeni nakumavidiyo wokuphromotha, ngakho-ke, wacela i-Easy Multi Display ukuthi imeluleke ngesixazululo esihle kakhulu sezimpawu zedijithali okufanele asikhethe, ngakho-ke simphakamisa ukuthi abe yi-Easy Multi Display, waqiniseka masinyane ngesoftware yethu futhi wanquma ukusithemba!
I-Acton Motor Spares yinkampani ehlome kahle ngoba isitolo sesivele sinabaqaphi abayi-10. Ukuze abonise okuqukethwe kubaqaphi bakhe, u-Abdul uthathe isinqumo sokuthenga amakhompyutha wokudlala ama-2 azophatha kalula lezi zingqapheli eziyi-10, izintambo eziyi-10 ze-HDMI nezinguqulo ezi-2 "ezijwayelekile" ze-Easy Multi Display ezizosakazwa kumakhompyutha abo. Ekugcineni, isixazululo sakhe esiphelele sabiza cishe ama-euro angama-3200.
Yiba yinkosi yemikhankaso yakho yokumaketha
Ngeke uphoqeleke ukuthi ucele insizakalo yokukhangisa yangaphandle ukudala izikhangiso zakho. Nge-Easy Multi Display, ungashintsha ngokushesha futhi kalula kusuka kusibonisi uye kwesinye! Akukaze kube lula kangako ukulawula umkhankaso wakho wokumaketha!